Xhorha – Zimalunga nekhulu – (100) izicelo esele zingenisiwe kwabe Inkciyo EC ngabo bazimisele ukuthatha inxaxheba kulonyaka, kwaye basalinde ezinye izicelo. Ngethuba sithetha nomququzeleli we Inkciyo EC, uNasizo Mndende ukungqinile ukuba zisavuliwe izicelo kude ibe ngumhla wamashumi amathathu kwinyanga ka June (30-June 2021)
Inkciyo EC liphulo eliququzelelwa ngu Umzi Kantu kwakunye ne Bomvane Youth Foundation, iinjongo ukukuxhobisa nokuphakamisa ulutsha lomnt’ omnyam’ abaphuma kwindawo ezihlelekileyo zephondo le Mpuma Kapa. Oku ikwenza ngokuba nika ulwazi ibaxhobisa ekulweni indlala kwakunye nemicelimngeni echaphazela uluntu ingakumbi ulutsha kwindawo abahlala kuzo kwiphondo iMpuma Kapa isebenzisa ubugcisa ne nkcubeko.
Ukuba unqwela umntwana wakho athath’inxaxheba kulonyaka ungathi ufake isicelo sakho kwangoku phambi kokuba kufike umhla wamashumi amathathu kwe yeSilimela – 30 Juni 2021. “Ukuba umntwana wakho uneminyaka eqala ku 8 kwaye ufuna abeyinxalenye ye Inkciyo Eastern Cape, ungasibamba kuWhatsapp wethu ongu: 066 389 3218 . Closing date is 30th June 2021” utyibele watsho uNasizo Mndende ecacisa indlela yokuthatha inkxaxheba kwi Inkciyo EC. Lomsitho kunyaka ophelileyo ubuyimpumelelo ubanjelwe kwi dolophu yase Xhorha phantsi kwemiqathango engqingqwa ye covid 19. Kwinyanga ka Julayi abaququzeleli be Inkciyo EC bazokube bese, Hout Bay eKapa batshilo ngethuba sithetha nabo.
Kutshanje intombi ze Inkciyo Eastern Cape beziphahle , iiKumkani, iiKumkanikazi , iiNkosi , Oosihlalo beNkosi kwiDistricts kunye neEastern Cape House of Traditional leaders eCofimvaba ngethuba kubanjwe iSATLA Awards Launch.
Qhagamshelana ne Inkciyo EC ku Whats App: 066 389 3218 okanye ku facebook : http://fb.com/inkciyoec